မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှ အော်သံများ: 2011
ကိုယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ဟာ သူ့အရိပ်အောက်မှာ မှုန်မှိုင်းရီပြာသွားတဲ့နေ့
ကိုယ့်ရင်ကိုခွဲတယ်...။ ) ၁
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:49 AM No comments:
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:48 AM No comments:
ခင်ဗျားကို ကျုပ်အိပ်မက်ထဲမှာ သတ်ပစ်လိုက်တယ်
ကျုပ်တို့ အိပ်မက်တစ်ခင်းစာက အခုထိကို စိမ်းစိုလတ်ဆတ်မလာဘူး
ကျုပ်တို့ ရင်ခုန်မြစ်က အခုထိကို ခမ်းခြောက်နေတုန်း
ကျုပ်တို့ရဲ့ဘ၀တွေလို့ အမည်တပ်ခွင့်မရတဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေက
အခုထိ ..(တကယ် အခုထိကို တံဆိပ်ပျောက်နေတုန်းပါ )
ဒါ ဘယ်သူ့ကြောင့် ...
“ခင်ဗျား မှားတယ် ၊ ကျုပ်မှန်တယ် ”
ကျုပ်အဲလို မငြင်းချင်ဘူး ၊ ခင်ဗျားလည်း မငြင်းလိုက်ပါနဲ့
ကျုပ်တို့ကို ထားခဲ့လိုက် ၊ ကျုပ်တို့ကို ထားပစ်ခဲ့လိုက်
ခင်ဗျားလည်း ရာဇ၀င်ထဲမှာ မင်နီစက်တွေနဲ့ကျန်ခဲ့မှာပ
ရော့ ...ဒီမှာ ကျုပ်တို့ကိုပေးခဲ့အိပ်မက် ခင်ဗျားပြန်ယူသွား
ဟိုး...အောက်အ၀ီစိအထိ ခင်ဗျား ယူ သွား
ရော့ .. ဓားချက်ပေါင်းအချက် နှစ်ဆယ်ကျော်
( ဒါ တန်ရာတန်ကြေးပဲ )
သွားသေလိုက် ...ကျုပ်တို့နဲ့ဝေးရာမှာ ခင်ဗျားသွားသေလိုက် ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:41 AM No comments: Links to this post
သူတို့ရဲ့စိတ်ခေါင်းတိုင်က အိပ်မက်မီးခိုးတွေသာ တငွေ့ငွေ့အူလို့
ရင်ဘတ်ကို တွန်းဝင်လာတာ ပန်းပွင့်ခြွေလက်များ
ပြကွက်တွေကို ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းမောလာပြီမို့
တစ်ခန်းရပ်သွားမှာ မနှမြောမိတော့ဘူး ၊၊
ခေတ်ကိုခေတ်နဲ့ချီပြီသာ ထပ်လွမ်းကြဦးစို့ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:23 PM No comments: Links to this post
လူတွေက အချိုးအကွေ့များတော့ မြစ်တွေပါကောက်ကြပြီကွဲ့
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:19 PM No comments:
ငေးမိငေးရာ ငေးရင်း ကိုယ်ဟာ ဟိုး....အပြင်ဘက်
အတ္တတွေဟာ ကိုယ့်ရှေ့က ကော်ဖီခွက်လိုအငွေ့ထောင်းထောင်းထ
ရင်ထဲမှာ ပန်းမပွင့်ဘူး ၊ လ မသာဘူး
ဘ၀ခြောက်ခြောက်ထဲ နေက ပျစ်ပျစ်တောက်အောင်ပူတယ်
တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ် ဒိုး ၊ ဒိုး ကုန်ကြ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 7:42 PM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:11 AM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:44 PM 1 comment:
လူတွေဟာ တိမ်တွေလို ဒရောသောပါးလွင့်မျောနေကြ
အိပ်မက်တွေကို ဆေးချယ်ရင်း ပန်းဟိုက်နေကြသတဲ့ ...၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:37 PM2comments:
ဆွဲမိ ဆွဲကိုင်ရာ နွယ်မြက်တွေဟာ ဓားတွေဖြစ်လာ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:25 PM No comments: Links to this post
ကျုပ်တို့ ၊ခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီအသံတွေပဲညံနေတယ်
ကျုပ်တို့ ရင်ခုန်တဲ့အိပ်မက်က အဲလောက်ပဲမို့လား
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:53 AM No comments: Links to this post
In my heart ,your face always does appear;
But , we'r now far.
Softly , reciding your name
With my bosom full of pain.
I'm still waiting your love;
Knowingly , you'll never come back to my heart .
Mg Yay Chan
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:51 AM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:33 AM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:32 AM No comments: Links to this post
ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းမူးသလိုပါလားကွယ် ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:27 AM 1 comment:
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:50 PM No comments: Links to this post
မေမေ့ကို မီးမီးတော့နားမလည်တော့ဘူး ဦးဦးတို့၊ဒေါ်ဒေါ်တို့ရယ်။ဒီနေ့လည်းကြည့်ဦးလေ...ထမင်းစားမလို့ကို
ထမင်းမချက်ဘူးတဲ့။ပိုက်ဆံမရှိလို့ဆိုပြီး ပြောတာပဲ။ထမင်းစားတာ ပိုက်ဆံလိုလို့လား ဦးဦးတို့၊ဒေါ်ဒေါ်တို့ရယ်။
ဖေဖေ့အကြောင်းလည်းပြောရဦးမယ်သိလား။ဖေဖေကလေ၊အမြဲတမ်းမူးနေတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။ မီးမီးလည်းမူးဖူးသားပဲ။ဟိုတစ်နေ့က ပိစိမတို့နဲ့ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဆော့တုန်းကလေ။မူးတယ်ဆိုတာ အဲဒါတဲ့။ဖေဖေမူးတာအဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။မျက်လုံးကြီးတွေနီလို့လေ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:29 PM3comments: Links to this post
ကိုရီးယားမင်းသားရိန်းက ချစ်ရေးလိုက်ဆိုသည်။ ကျွန်မခြေလေးဆောင့်ပြီး စိတ်ဆိုးဟန်ပြုကာ သူ့ရှေ့မှ ထွက်လာခဲ့သည်.။သူက အူးလျားဖားလျားပြေးလိုက်လာပြီး ကျွန်မရှေ့ရောက်တော့ ဒူးလေးထောက်ချပြီး
ချစ်စကားကို ခခယယပြောပြန်သည်.။ကျွန်မလည်း ခပ်မြူးမြူးလေးပြုံးပြီး အဖြေပြန်ပေးလိုက်သည်။သူလည်း
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်တွဲပြီး လျှောက်လည်ကြသည်..။ဇိမ်ခံသဘောင်္ကြီးများ ၊အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်ကြီးများပေါ်မှာ ပျော်ချင်တိုင်းပျော်ကြသည်.။စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ သူက ကျွန်မကို“ဘာလိုချင်သလဲ”ဟုမေးသည်.။ကျွန်မကအသည်းပုံလေးတွေပါသည့်ခရမ်းရောင်ထီးလှလှလေး တစ်လက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြမိသည်။သူဝယ်ပေးတော့ ကျွန်မအလွန်အမင်းပျော်သွားသည်......။
“ သမီး...၊ထတော့ ...ထတော့ ၊၊ လေးနာရီတောင် ထိုးနေပြီ၊၊သုံးနာရီခွဲလောက်ထပါဆိုတာကို..၊
အမြဲတမ်း နှိုး နှိုးနေရတယ်နော်..။ဟင်း..၊အိပ်နေလိုက်တာများ ...။ငါ့မှာတော့မိုးတွေရွာတာနဲ့
တစ်ညလုံး မအိပ်ရသေးဘူး ၊၊ဟိုနား မိုးယိုတာကိုခံလိုက် ၊ ဒီနား ယိုတာကိုခံလိုက်နဲ့ ၊၊ တစ်ည
လုံးမအိပ်ရသေးဘူး ညည်းမှာတော့ ဇိမ်နဲ့ကို အိပ်နေလိုက်တာနော်..။ ဟဲ့...ထတော့ဆို...။ ”
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:09 PM 1 comment: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:44 PM 1 comment: Links to this post
နှလုံးသားကန်ရေပြင်ထက်အလွမ်းနှင်းမြူတို့ခပ်ဝေ့ဝေ့လေးရစ်သိုင်းနေ၏..၊၊လွမ်း၏..၊၊လွမ်း၏...၊၊ ၊သေလုအောင်ပင်လွမ်းမိ၏ ၊၊ဖြူ၍နုသော၊၀င်း၍၀ါသောပါးပြင်လေးသည် နှလုံးသားထဲသို့ကဗျာခြေရာပေါင်း
များစွာထပ်စေခဲ့သည်...၊၊ကော့၍မတ်သော ၊စိမ်း၍စိုသောမျက်တောင်ဖျားလှလှလေးများပေါ်တွင်ကျွန်တော့် အချစ်တို့ခိုလှုံခဲ့ဖူးသည်၊၊သူ့ကြောင့်သာ ခြောက်သွေ့သောနေ့ရက် တို့သည်စိမ်းစိုလတ်ဆတ်ခဲ့ရသည် ၊၊ခမ်းနားလှပချိုမြိန်ခဲ့သော အိပ်မက်တွေထဲတွင် တိမ်းမူးပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးသည် ၊၊“ချစ်တယ် ...ချစ်တယ် ”
ယခုမူကား.....သူသည်အလွမ်းလှောင်အိမ်ထဲတွင်ကျွန်တော့်နှလုံးသားကိုထည့်ပိတ်ကာထွက်သွားရက်လေပြီ....၊၊ သူ့ရှိရာအရပ် ဟိုး........အဝေးကို ကျွန်တော့်အိပ်မက်တို့သည် မကြာခဏရောက်တတ်လေပြီ..၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:09 PM No comments:
အထဲမှာ ဘာမှမရှိ ပန်းချီပြပွဲမှ
အထဲမှာ ဘာမှမရှိ ငါတို့ဟာ
အထဲမှာ ဘာမှမရှိ ကမ္ဘာမှာ
ဘာများ ရှိစေချင်ခဲ့သလဲ ။ ။
(ကဗျာလောက စုစည်းမှု-၂ မှ )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:37 AM 1 comment: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:36 AM No comments: Links to this post
အသားမာတွေလည်း တက်ခဲ့….။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:35 AM No comments: Links to this post
ဖဲရိုက် … ဖွန်ကြောင်…
သားမြင်နေရတယ် … မေမေ.ရေ….။
ရင်ခုန်ခြင်း …..စိုးစဉ်းတောင် မရှိ….။
တစ်နေ့တော့ ပေါင်းရမှာပေါ့ ” တဲ့..
တာရာမင်းဝေရဲ့ “ ကျောင်းဖွင့်ချိန် ” ထဲကစာသား…
ဒီကျောင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး….မေမေ
အဲဒီ ကဗျာထဲက ….ကျောင်း
သားဒီနေ့ ကျောင်းမသွားချင်ဘူး …မေမေ…။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:32 AM No comments: Links to this post
Youth magazine,ဒီဇင်ဘာလ ၊ 2010 ခုနစ်
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:31 AM No comments:
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:30 AM No comments: Links to this post
အန္တရယ်များတဲ့တောနက်ထဲမှ ၀င်ခဲ့မိတာပါ..။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:29 AM No comments: Links to this post
သရပါ မဂ္ဂဇင်း ဒီဇင်ဘာလ ။ ၂၀၁၁
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:28 AM No comments:
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:27 AM 1 comment: Links to this post
---- အရာရာ အတွက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိတယ်.
သကာရည်လောင်းထားတဲ့ အပြုံးချိုချိုတွေကို ထိုးကျွေးရင်း..
နောက်ကျောဘက်တွေမှာတော့ မာယာဓားသွားတွေ ထက်မြမြနဲ့ပေါ့..။
ငြိမ်းချမ်းရေးရနံ့တွေ နှုတ်က ထုံမွမ်းထားပေမယ့်
အားလုံးဟာ..“ ရုန်းကန်ခြင်း ” မှာ..မိန်းမောနေကြတယ်..
............ .............. ......
အဲလို ..အဖြစ်အပျက်တွေရှိတဲ့ နေရာ ပေါ့...........။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:26 AM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:25 AM No comments: Links to this post
မျှော်လင့်ချက်က .၀ိုးတ၀ါး ..
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:22 AM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:20 AM No comments:
---လောကဓံဒိုင်ကို ဘယ်လိုများနိုင် နိူင်မလဲ..
ဗလာနဲ့ပဲ အိမ်ပြန်ရမှာ မဟုတ်ပါလား...။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:18 AM No comments:
I pay you the nights I sleep
In my dream,With you to meet
The night is ,too, long
So,My love is strong
But, Am I wrong ?
I missed the lips
That I have no chance to kiss...
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:18 AM No comments: Links to this post
မေး. မင်းသူ့ ကိုဘာလို့ ချစ်တာလဲ
ဖြေ. သူ့ မှာမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားရှိလို့ 
ဖြေ. ငါ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးငါတို့ အားလုံးအတွက်ပါ
ဖြေ. ! အို ဖြေစရာမလိုဘူးလေ...ထင်ရှားစေပြီးသားပဲ
ဖြေ. ငါ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုမှ !!!
ငါတို့ အားလုံးအတွက် သူပေးဆပ်ခဲ့တယ်
သူရဲ့ ဘ၀သူ့ ရဲ့ အသက် ပြီးတော့အရာရာအားလုံးပေါ့
ဖြေ. ဟေ့ ဘာမှမမေးနဲ့ တော့သူ့ အကြောင်းကသမိုင်းတွင်ခဲ့ပြီ
( Hello အနုပညာ ဂျာနယ် Vol.3Issue 47 .July 2012 )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:16 AM No comments:
ရုန်းမရအောင်လို့ သံယောဇဉ်ကြိုးစတွေနဲ့ နှောင်တင်းလို့
အချစ်နွံ့အိုင်ဆိုတာ အဆင်းလွယ်ပြီး အတက်ခက်တယ်
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:16 AM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:13 AM No comments:
ကဗျာဟာ ကောင်းကင်တစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မယ်
ရနံ့မဲ့သွားတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ပေါ့ကွယ်.....၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:05 AM No comments: Links to this post
နတ်ဆိုးက မှော်ဝတ်ရုံလွှာကို ချွတ်ချ
ကိုယ်တို့ဟာ ဒီသံသရာမှာ တ၀ဲလည်လည်နဲ့
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:03 AM No comments: Links to this post
ကြိုးကြာငှက်တွေလို အုပ်စုဖွဲ့ပျံသန်းနေကြတယ် ၊၊
တစ်ယောက်နှလုံးသားကို တစ်ယောက်ပွေ့ထွေးထားကြ …၊၊
နှလုံးသားကို အန်ထုတ်ပြီး ရေးဖြစ်သွားတယ် ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:48 PM No comments: Links to this post
ဘ၀ဆိုတာလည်း သန်းခေါင်ထက်တော့ ညဉ့်မနက်တော့ပါဘူး
ဒုက္ခကို လှပစွာချုပ်သီတတ်ဖို့ပဲ လိုလိမ့်မယ်....
ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနေရတာလောက် ပျော်စရာကောင်းတာမရှိဘူး ...၊၊
ကိုယ့်ရနံ့ကိုယ်မွှေးနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်လေ...................၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:46 PM No comments: Links to this post
ကိုယ်ဟာ အိပ်မက်တွေထဲ သေဆုံးသွားခဲ့
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:43 PM No comments: Links to this post
အတိတ်ဆိုတာ ချိုချို ခါးခါးပါလေ
အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ဖို့ အိပ်မက်တချို့ လတ်ဆတ်ပါရစေ
ပြာလဲ့အက်ကွဲလို့ အိပ်မက်ကြယ်ကြွေသွားလည်း ကိုယ်မငိုဘူး
လောကဓံက ကျွေးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာ ပီကေတစ်ခုလိုပါပဲ
ပီကေတစ်ခုပါပဲ (ဟန်မပျက်ဝါးနေရုံပေါ့ )
အငဲရဲ့ “နယ်မြေသစ်များစွာ ” သီချင်းပါ ၊၊
ဘ၀ ဟာ ည မဟုတ်ဘူး
(အလင်းကို ရှာဖွေဖို့အတွက် )
နေသာ လသာ မျှော်စရာမလို
( နှလုံးသားထဲက ကြုံးဝါးလိုက်တယ် )
ခပ်မိုက်မိုက်ကို ဖြိုချပစ်မယ် ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:34 PM No comments: Links to this post